Yeyiphi imibala ethandekayo xa unxiba indoda | Amadoda aQinisekileyo
Yeyiphi imibala ethandekayo xa unxiba indoda
Nxiba ngesitayile kwaye udibanise imibala into abayithandayo ayingomsebenzi onzima. Kodwa ukuba ufuna ukuyazi kuqala apha singakunikeza ukuba yeyiphi imibala zezona ziphethe kakuhle xa kufikwa ekunxibeni indoda.
Kuya kufuneka uhlale uyikhumbula loo nto ithoni yesikhumba inokunceda ukukhetha umbala oza kulunga ngcono kunenye, kodwa ungangxami ukubeka loo mbala kuba. Imibala nayo inento yokwenza nomzuzu kunye nendawo abaza kuqhayisa ngayo.
1 Yeyiphi imibala ethandekayo xa unxiba?
2 Umbala wengubo ngokwethoni yesikhumba sakho
2.1 Kwiithoni zolusu ezifanelekileyo
2.2 Kwiithoni zesikhumba esimnyama
3 Umbala weempahla zakho ngokwexesha lonyaka
3.1 Imibala yeempahla ebusika
3.2 Imibala yeempahla ehlotyeni
Yeyiphi imibala ethandekayo xa unxiba?
Gcina ukhumbula ukuba imibala ngumba obaluleke kakhulu kuwe kwaye nguwe kuphela onokukwazi ukuba zeziphi eziziva zilunge kakhulu. Ukuze ukwazi ukuyinxiba intuthuzelo kufuneka yoyise Xa uyikhetha, ngekhe wazi ukuba umbala okanye isambatho sizokufanela kangakanani de ube uyazama. Ezi ziingcebiso ezinokukunceda, kodwa sinokuphinda siqwalasele imibala efanelekileyo kakhulu.
Njengomgaqo oqhelekileyo, eyona mibala mihle kunye ezona zixhaphakileyo zimhlophe, mnyama, ngwevu kunye nekhakhi. Yeyona mibala isisiseko kwaye edityaniswe kakuhle nawo nawuphi na umbala, ke ngoko, akufuneki ukuba ulahlekile kwikhabhathi yakho yempahla.
Imibala yeBold nayo ibalulekile kwaye uninzi lwazo luhle kakhulu, ngakumbi ukuba ziyimibala yefashoni yelo xesha lonyaka. Umbala we-salmon, opinki, otyheli, u-emerald oluhlaza, oluhlaza okwesibhakabhaka, imvubu, ulwandle okanye abahlali... zezo ziseta imikhwa, nokuba yeyokunxiba nje okanye iimpahla zemidlalo kwaye kuya kufuneka unxibe xa uthanda, kodwa ngendlela enobulumko ngakumbi.
Umbala wengubo ngokwethoni yesikhumba sakho
Ngaphandle kwamathandabuzo, umbala wengubo yinyani okanye sisimo sobuqu kakhulu Kuya kufuneka baziva benomdla kumntu, kufuneka ibukhanyise ubuso bakho. Ungawuthanda umbala kwaye ungaziva ngathi ubunzima, nangona kunjalo, xa ujonga abanye, ngumbala ofanelekileyo. Ngokwethoni yesikhumba sakho Ungadibanisa ezinye iimpahla kunye nokunye oku siya kukubonisa apha ngezantsi:
Kwiithoni zolusu ezifanelekileyo
Iimpawu ezihambelana kakuhle nomhlophe okanye ulusu olukhanyayo imibala emnyama. Phakathi kwabo sineziseko ezinje abamnyama, Esoloko ilolona khetho lufanelekileyo kunye nabanxibe kakhulu. Umbala oluhlaza okwesibhakabhaka, kunye neethoni ezimnyama zoluhlul oluhlaza, obomvu, mfusa kunye nomdaka. Imibala ekhanyayo ikwabonakala intle, ngaphandle kwephuzi. Phakathi kwabo, beige nomhlopheNangona le yokugqibela iqhubeka ijongeka ngcono ngakumbi kwiithoni zolusu ezimnyama.
Kwiithoni zesikhumba esimnyama
Izikhumba ezimnyama zilungele ukudibanisa imibala yalo naluphi na uhlobo. Ukuba zinemibala emnyama, kufanele kuqatshelwe ukuba banokumakisha amanqaku ebusweni ngakumbi. Bahlala bebukeka behle Imibala engwevu, luhlaza okwekhakhi, luhlaza namhlophe. Umbala oluhlaza okwesibhakabhaka omnyama kakhulu ujongeka ulungile, kodwa awuzukuqaqambisa uninzi lomntu, kwaye akufuneki ubheje kwi imibala yekofu emdaka okanye iipepuli.
Umbala weempahla zakho ngokwexesha lonyaka
Enye into ebalulekileyo ngumbala kuxhomekeke kwixesha lonyaka: ngokubanzi ihlobo okanye ubusika. Siyaqhubeka nokwabelana ngeethoni ezikuthandayo ngokuxhomekeke kwithoni yolusu lwakho kwaye uya kuyisebenzisa kunye neengcebiso zangaphambili.
Imibala yeempahla ebusika
Iithoni kunye nemibala exhaphake kakhulu ngeli xesha lonyaka yimibala esisiseko, kubandakanya mhlophe, luhlaza okwesibhakabhaka, omnyama namnyama ngwevu. Zingasoloko zixutywe kwaye zihambelana nomnye nomnye. Khetha ezo banokulinganisa umbala wakho wamehlo kunye nombala weenwele. Kuxhomekeka kwimfashini ebonakalayo kulo nyaka, kuya kufuneka usebenzise enye yemibala eseta imeko, kuhlala kukho umbala oqaqambileyo ocacileyo kwaye ungadibanisa nayo nayiphi na imibala esisiseko.
Imibala yeempahla ehlotyeni
Imibala esetyenziswe kwakhona zizinto ezisisiseko. Zijongeka zilungile kunxiba umbala mhlophe-mhlophe, luhlaza okwesibhakabhaka ujija amalahle, grey ukukhanya nomnyama, kodwa eyokugqibela kuphela ngamanye amaxesha. Eminye imibala onokuyisebenzisa yileyo inxitywayo ngeli xesha lonyaka, ihlala ikhona enye ebonakalayo ngombala oqaqambileyo okanye oqaqambileyo. Zivela kwi-turquoise, ebetha eluhlaza, ephuzi kuzo zonke i-shades kunye ne-lilac okanye i-raspberry.
Khumbula ukuba umba wemibala ubaluleke kakhulu, kodwa akufuneki ubaxwe ngawo indibaniselwano yazo eqhumayo, kufuneka usoloko funa imvisiswano. Kuyacetyiswa ukuba uhlale ukhangela loo mibala kwivenkile enye kwaye uzame, ngale ndlela uya kuqinisekisa ukuba yeyiphi ifanele ithoni yesikhumba sakho, umbala weenwele, umbala wamehlo kunye nobudala.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Ukunyamekela » Yeyiphi imibala ethandekayo xa unxiba indoda
Ungalahlekelwa njani ngamanqatha esisu ngokukhawuleza nangempumelelo